भेराक्रूजको विशिष्ट पोशाक, मेक्सिकन र स्पेनिश संस्कृतिहरूको बीचको संश्लेषण | यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | 13/04/2021 09:54 | संस्कृति, मेक्सिको
भेराक्रूजको विशिष्ट पोशाकले एकातिर यस मेक्सिकन राज्यको अटोचथनस सब्सट्रेटलाई र अर्कोतर्फ स्पेनी उपनिवेशहरूको प्रभावलाई देखाउँदछ। यो सत्य हो कि भेराक्रुज क्षेत्रका प्रत्येक शहर र साथै सबै देश तिनीहरूको आफ्नै छ विशिष्ट कपडा, तर त्यहाँ एक सूट हो कि दुवै राज्य र यसको राजधानी दुबै परिभाषित गर्दछ।
किनभने भेराक्रुज पूर्वी तटमा छ मेक्सिको र यो तातो उष्णकटिबंधीय जलवायु छ, यसको विशिष्ट कपडा बल, हल्का र धेरै न्यानो हुनु हुँदैन। बीस डिग्री भन्दा बढीको औसत ताप सबै वर्ष तातो कपडाको साथ सहन सकिदैन। तर त्यहाँ अन्य धेरै तत्वहरू छन् जुन निर्धारित गर्दछ भेराक्रूजको विशिष्ट पोशाक। यदि तपाईं तिनीहरूलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई पढ्ने जारी राख्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 भेराक्रसको विशिष्ट पोशाकको इतिहास
2 Jarocho सूट कस्तो छ
2.1 महिलाको लागि विशिष्ट भेराक्रूज पोशाक
2.2 पुरुषहरूको लागि भेराक्रूजको विशिष्ट पोशाक
3 जब विशिष्ट जारोचो पोशाक प्रयोग हुन्छ
भेराक्रसको विशिष्ट पोशाकको इतिहास
हामीले तपाईलाई देखाउनु पर्ने पहिलो कुरा भेराजुजको राज्यले पनि प्रयोग गर्दछ चारो सूट र टेहुनो वार्डरोब। पछिल्लो राज्यको Zapotec महिलाहरु द्वारा प्रयोग गरीएको थियो ओक्साका र चित्रकार द्वारा अमर थियो फ्रिदा खलो उनको धेरै चित्रहरुमा। तर यो र पहिलो दुवै मेक्सिकोको विश्व प्रतीक बन्न पुगेको छ। तसर्थ, यसले तपाईंलाई आश्चर्यचकित पार्दैन कि तिनीहरू पनि भेराक्रुजको विशिष्ट छन्।
हामीले भर्खरै तपाईलाई ब्याख्या गरेको सबै कुराको बावजुद, विशिष्ट भेराक्रूज पोशाक पार उत्कृष्टता भनिन्छ jarocho सूट, जुन तथाकथितबाट आउँदछ सोटावेन्टो भेराक्रुजानोभन्न खोजिएको हो, राज्यको क्षेत्र यस प्रकारले डिमिनेमेन्ट गरियो जुन उही एकको दक्षिणबाट फैलियो। साथै, यो पोशाकको धेरै रोचक इतिहास छ।
यो भनिन्छ कि पहिलो महिलाहरु स्पानियार्डको साथ आएका थिए Papaloapan बेसिन तिनीहरू इबेरियन प्रायद्वीपबाट ल्याइएको लुगा लगाउँथे। तिनीहरू थिए Andalusian वा Levantine शैली पोशाक कालो र भारी कपडा संग बनेको। तर भेराक्रुजको यस क्षेत्रमा, जस्तो कि हामीले तपाईंलाई पहिले नै भनेका थियौं कि यो एकदम तातो छ र यसको साथै आर्द्रता पनि व्याप्त छ। त्यसकारण, स्पेनबाट ल्याइएको लुगा उपयुक्त थिएन, किनकि यो चिसो मौसमको लागि बनाइएको थियो।
यी महिला सूटहरूमा रंगीन स्कर्ट, एक कढ़ाई एप्रन, एक लेस शल, कपास स्टोकिंगहरू, र मखमल जुत्ता समावेश थिए। थप रूपमा, तिनीहरू रेशम वा मखमलको रिबन द्वारा घाँटीमा जोडिएका पदकहरूले सजिएका थिए।
महिलाका लागि भेराक्रूज विशिष्ट पोशाक
यद्यपि मूल निवासी महिलाहरूले फ्लोरी स्कर्ट र ब्लाउज बबिन लेस र ड्रप काँधहरू लगाउँथे, साथसाथै कवटरको आकारमा फुटवेयर। स्पेनिशले कसरी बुझ्छन् अधिक उपयुक्त यो लुगा भेराक्रूज जलवायुको लागि र उनीहरूले स्पेनबाट ल्याएका लुगाहरू छोड्न थाले।
केहि हिस्पैनिक प्रभावको साथ स्थानीय पोशाकको मिश्रणको रूपमा jarocho सूट, जुन पनि पुरुषहरु को लागी उस्तै रूपहरु लाई अपनाईयो। यो थियो, त्यसैले, प्रायद्वीपीय फेशन र सोटाभेन्टो भेराक्रुजानो बीचको संश्लेषण प्रक्रिया। थप रूपमा, सामान र गहनाहरू थपियो।
एकपटक हामीले केहि इतिहास गरिसकेपछि, यो समयलाई ठोस र विस्तृत रूपमा भेराक्रुजको विशिष्ट पोशाक कस्तो छ भनेर वर्णन गर्ने समय हो।
Jarocho सूट कस्तो छ
तार्किक रूपमा भेराक्रुजको विशिष्ट पोशाक वर्णन गर्नका लागि हामीले महिला र पुरुषका लागि लुगाहरू बीच भिन्नता हुनुपर्दछ। यद्यपि दुबैमा दुई साझा डिनोमिनेटरहरू छन्: सेतो र color र हल्का कपडा तातो लागि उपयुक्त।
महिलाको लागि विशिष्ट भेराक्रूज पोशाक
महिलाको लागि Jarocha कपडा छ राम्रो पनि त्यो मान्छे को लागी भन्दा बढी, किनकि यो छ अधिक फीता, कढ़ाई र गहनाहरू। यस पोशाकको आधारभूत तत्त्वहरू निम्न छन्:
प्रकारको ब्लाउज नाइटगाउन कपास र छातीमा कपासले बनेको सेतो र "जाल"। यसको मतलब त्यो हो कि ती भागहरूमा ग्रिडको रूपमा उनीहरूसँग एउटा कढ़ाई छ। थप रूपमा, यो घाँटीमा रेशम रिबनले बनेको ब्यारेटको साथ समाप्त हुन्छ।
पेटीकोट सेतो पनि छ र तल ग्रिड पनि गरिएको छ जुन पृष्ठभूमिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
una स्कर्ट पेटीकोटमा धेरै लामो र फराकिलो उडान जुन कि ankles लाई कभर गर्दछ र जुन सामान्यतया सेतो पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी, यो संग सजिएको छ कढ़ाई र भएको थियो ग्लु को एक बिट.
एप्रन कालो मखमलमा छोटो र रातो-स्वरको फूलहरू र घुमाउरो फीताको साथ कढ़ाई। योaको माध्यमले कम्मरमा जोडिएको छ रेशम रिबन र उसको कम्मरमा एक छ bandana कपासले बनेको छ, त्यो हो, दुई रंगको छापिएको कपडाले बनेको ठूलो रुमाल।
una mantilla वा शाल जुन लेस वा एम्ब्रोइड्रेड ट्यूलबाट बनेको हुनसक्दछ। यो ए को माध्यम बाट छातीमा जोडिएको काँधमा राखिन्छ लोकेट वा क्यामियो नाइटगाउनको जाल मुनि प्रकाश पार्न।
Un शाल वा दोस्रो शल विस्तृत रूपमा रेशम धागोको साथ बनेको छ र त्यो रिबनसँग मिल्दछ जुन कपालको श्रृंगार गर्दछ।
एक महिला jarocho पोशाक लगाई
माथिको सबै साथ, महिलाको लागि भेराक्रुजको विशिष्ट पोशाक सामेल छ बिभिन्न सामानहरु y एक विशिष्ट केश। पछिल्लोको बारेमा, यसले बन र दुई चोटीहरू समावेश गर्दछ जुन एक क comb्गेको रूपमा हेडड्रेससँग सज्जित हुन्छ, यसलाई पनि भनिन्छ cachirulo। अन्तमा, कपाल गार्डियास वा गुलाबले सजाइएको हुन्छ जुन एक पक्ष वा टाउकोको अर्कोपट्टि राखिन्छ जुन व्यक्तिको वैवाहिक स्थितिमा निर्भर गर्दछ। यदि उहाँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने, तिनीहरू देब्रेतिर जान्छन्, र यदि ऊ विवाहित छ भने, तिनीहरू दायाँ जान्छन्।
महिलाहरूको लागि विशिष्ट भेराक्रूज पोशाकका सामानहरूका लागि, ए प्रशंसक को माध्यम बाट घाँटी बाट झुण्डिएको कलर। यो सामान्यतया पारिवारिक रत्न हो। यो सुन वा मोतीले बनेको हुन्छ, तर कोरल वा फिलीग्री पनि। अन्तमा, केहि अवस्थाहरूमा मखमलको रिबनद्वारा घाँटी वरिपरि क्रूसीफिक्स लगाइन्छ।
पुरुषहरूको लागि भेराक्रूजको विशिष्ट पोशाक
Mucho बढी सजिलो त्यो माथिको पुरुषहरूका लागि विशिष्ट भेराक्रज पोशाक हो। यद्यपि यो अत्यन्तै सुन्दर पनि छ र हामीले तपाईलाई भनेजस्तै सबै कपडाको सेतो रंगको लागि बाहिर जान्छ। यस अवस्थामा, सब भन्दा महत्त्वपूर्ण निम्न हो:
Un प्यान्ट खुट्टामा पुग्ने ताजा कपडाले बनेको छ, त्यो हो कि, अन्य विशिष्ट पोशाकहरू जस्तो यो ब्यागी वा घुँडा-लम्बाई होईन।
una गुयाबेर वा लामो बाहुलासहितको शर्ट, छाडा र अगाडिको झोलाको साथ हल्का कपडाबाट बनेको। यो पनि सामान्यतया यसलाई सुन्दरताको एक स्पर्श दिन खुशीयाली छ।
जुत्ता टाइप गर्नुहोस् लूट र कालो वा सेतो रंग।
पाम टोपी यसको माथिल्लो क्षेत्रमा चार टुक्राटाई (जसलाई "ढु stones्गा" पनि भनिन्छ) संग।
Palliate वा चम्किला रंगहरूमा ठूलो रूमाल, प्राथमिकता रातो र कालो, घाँटी वरिपरि।
जस्तो कि हामीले तपाईंलाई व्याख्या गरेका थियौं र तपाईं हाम्रो विवरणबाट अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ, पुरुषहरूको लागि विशिष्ट भेराक्रूज पोशाक महिलाको तुलनामा धेरै कम विस्तृत हुन्छ। यद्यपि यससँग पूर्ण रूपमा संयोजन गर्दछ.
ठेठ पोशाकको साथ भेराक्रूज नागरिकहरूको समूह
जब विशिष्ट जारोचो पोशाक प्रयोग हुन्छ
सामान्यतया, जारोचो पोशाक प्रयोग गरिन्छ कुनै पनि लोक घटना वा छुट्टी जुन भेराक्रुजको राज्यमा मनाइन्छ। धेरै परम्परागत नृत्य समूहहरू यसको व्याख्या गर्न ठीकसँग प्रयोग गर्दछन् तिनीहरू jarocho वा zapateado हो। त्यहाँ दुई प्रकारका नाचहरू छन्: जोडी आवाज र तथाकथित "ढेरबाट" एक समूह मा नाच को लागी।
सँगैको संगीत बजाइएको छ समान पारम्परिक उपकरणहरू जाराना जस्तै, एउटा सानो गितार; रिकिन्टो, अघिल्लोको जस्तै उही परिवारबाट; वीणा, तम्बोरिन र गधाको बaw्गारा, टक्राउनको लागि पछिल्ला। सबै मार्फत व्याख्या गरिएको छ किसान मूल को धुन, जसमध्ये केही विश्वव्यापी रूपमा प्रख्यात भएका छन्। उदाहरण को लागी, ला बाम्बा, हसलर o पागल सिरप.
तिनीहरू पनि व्याख्या छन् हुपांगोस, क्षेत्र मा उत्पन्न हुने तिर्नरी समय हस्ताक्षर मा धुन, र पनि प्रसिद्ध Cuban Danzón को रूप मा अफ्रो-क्यारिबियन मूल को ताल।
अर्कोतर्फ, तपाइँ पनि यी चाडहरू कहिले हुन्छ भनेर जान्न चाहनुहुनेछ। यसैले, यदि तपाइँ भेराक्रूज भ्रमण गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको यात्रा उनीहरूसँग मिल्दो बनाउन सक्नुहुन्छ। सूचित मिति मध्ये एक हो कार्निवल भेराक्रूज शहरबाटै, "संसारमा सब भन्दा खुसी" भनेर वर्णन गरिएको छ।
तर Jarocho संसार को शहर मा आवास पाया छ जलतिपान, भेराक्रूजको राज्यबाट नै। बर्षको अन्त्यमा यो शहर को आयोजन गर्दछ Fandango महोत्सव, जसले सबै देश र विदेशमा पनि लोकप्रिय संगीत कलाकारहरू एक साथ ल्याउँदछ। त्यसकारण, jarocho ध्वनि र नृत्य यस घटनामा अनुपस्थित हुन सक्दैन।
त्यस्तै गरी, जारोचा परम्पराको कर्डोबा शहरमा पनि गहिरो जरा रहेको छ, यसलाई पनि भनिन्छ लोमास डे हुइलान्गो, बिन्दु मा कि यो एक आयोजन Son Jarocho Encounter जसमा भेराक्रसको विशिष्ट पोशाकको साथ शोहरू पनि सामेल छन्। तर अन्य कार्यहरू जस्तै वर्कशपहरू, बैठकहरू, सम्मेलनहरू र भारा समारोहहरू जस्तै भेराक्रुज राज्यको यो परम्परागत संस्कृति संरक्षणको लागि।
अन्तमा, हामी तपाइँको शहर को बारे मा बताउँछौं Tlacotalpanजुन पापालोपन बेसिनको सिमानामा अवस्थित छ, जहाँ हामीले तपाईंलाई भनेको छ कि जारोचो पोशाकको जन्म भएको थियो। यस सुन्दर शहरमा, जसको ऐतिहासिक केन्द्र घोषित भएको छ मानवता को सांस्कृतिक विरासत, मा मनाइएको छ जारानेरोस र डेसिमिस्टासको बैठक। यो त्यो उत्सव हो जुन सबै संगीत अभिव्यक्तिहरूको संरक्षणको लागि समर्पित छ जुन छोरा जारोचोमा समूहीकृत गरिएको छ र यो सबै मेक्सिकोमा सब भन्दा महत्वपूर्ण फोकलोरिक घटनाहरू मध्ये एक हो।
अन्तमा, हामी तपाइँको उत्पत्ति के हो भनेर तपाईंलाई वर्णन गरेका छौं विशिष्ट पोशाक वेराक्रुज़, साथै यो दुबै महिला र पुरुष दुबैको लागि बनाउँछ। र, त्यसरी नै, यसलाई लगाउनको लागि सबै भन्दा राम्रो मानिने उत्सवहरू के हुन्। जे भए पनि, यो परम्परागत लुगा हो अधिक जरा र अधिक सराहना मेक्सिकन देश भर।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » मेक्सिको » भेराक्रूजको विशिष्ट पोशाक